बेलायतमा ट्रकभित्र कसरी मारिए ३९ चिनियाँ नागरिक ? घटना अझै रहस्यमै - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बेलायतमा ट्रकभित्र कसरी मारिए ३९ चिनियाँ नागरिक ? घटना अझै रहस्यमै
एजेन्सी । यूकेको एसिक्समा एउटा लरी कन्टेनरभित्र फेला परेका ३९ वटा शव चिनियाँहरूको भएको खुलेको छ । पूर्वी ग्रेजस्थित वाटरग्लेड औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय समयानुसार बुधवार १:४० बजेतिर त्यहाँ शव भएको सूचना पाएपछि एम्बुलेन्स सेवाले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो । उक्त ट्रकमा ८ महिला र ३१ पुरुषको शव वातानुकुलित वातावरणमा राखिएको भेटिएको हो ।
हत्याको आशङ्कामा नोर्दन आयरलन्डका २५ वर्षीय लरी चालक मो रोबिन्सनलाई पक्राउ गरिएको छ । रोबिन्सन अझै प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । एसिक्स प्रहरीले शुरूमा सो लरी बल्गेरियाबाट हिँडेको भनेपनि पछि बेल्जियमबाट यूके छिरेको बताएको छ। सो लरी एङ्गलसीको हलिहेड हुँदै शनिवार ब्रिटेन छिरेको बताइएको छ ।
३९ शवहरु चिनियाँ नागरिकहरुको भएको पुष्टि गरिए पनि ती मानिसलाई कसले, कहाँ हत्या गरेर त्यहाँ पुर्यायो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन । साथै उनीहरु को हुन् र परिवारका सदस्य कहाँ छन् भन्ने व्यक्तिगत पहिचानको बारेमा पनि अझै केही पत्ता लागेको छैन ।
सीमा क्षेत्रबाट त्यति धेरै मानिसको शव बेलायत जस्तो कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको मुलुकमा कसरी पुग्यो भन्ने बारेमा अझै पनि वास्तविकता खुलेको छैन । ती चिनियाँ नागरिकहरु कसरी, कहाँबाट ल्याइए, कहाँ मारिए भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै रहस्यमै छ ।
यद्यपि बेलायत र बेल्जियमस्थित चिनियाँ दूतावासहरुले सम्बद्ध देशका अधिकारीहरुसँग मिलेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छन् । बेलायतका लागि चीनका राजदूत लियो शियामिंगले ट्विट गर्दै भनेका छन्,‘‘भारी मनका साथ मृत्युको रिपोर्ट पढ्यौं । हामी बेलायती प्रहरीको सम्पर्कमा छौं ।’’
शवलाई चेम्सफोर्डको ब्रुमफिल्ड अस्पतालको मुर्दाघरमा पठाइएको छ । इमिग्रेसन सर्भिस युनियनका एक अधिकारीले भनेअनुसार बेलायतमा हरेक दिन यति धेरै संख्यामा कन्टेनर आउँछन् कि सबैको भित्र के छ भनेर जाँच्न मुश्किल छ । कुनै खुफिया रिपोर्ट आएको अवस्थामा मात्रै उनीहरुले त्यस्ता सवारी साधन जाँच गर्छन् । बुल्गेरियाको विदेश मन्त्रालयले सो ट्रक आयरल्याण्डका एक नागरिकको नाममा दर्ता रहेको जनाएको छ ।
यसअघि पनि चीनका नागरिकहरु यसैगरी पटक पटक बेलायतमा ट्रकमा मृत अवस्थामा भेटिएका घटना रहेका छन् । सन् २००० को जुन महिनामा ५८ चिनियाँ आप्रवासीका शव ब्रिटेनको डोभरमा एउटा लरीको पछाडि फेला पारिएको थियो। त्यहाँ दुई जना जीवितै थिए। हत्या गरेको अभियोगमा उक्त लरीका डच चालकलाई जेल सजाय भएको थियो।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो सम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।